Prime Video တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ (၂၀၂၀) - ဖျော်ဖြေရေး
Prime Video တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
Amazon Prime Video တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာသောအသေးစားပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အဓိကပြissueနာကဘာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကရွေးချယ်စရာရွေးစရာများပြားတဲ့ရုပ်ရှင်စုဆောင်းတာနဲ့သိပ်ခက်တယ်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောရုပ်ရှင်များစွာရှိသည်။ ဒီရုပ်ရှင်တွေကို Amazon Prime Video မှာကြည့်ပြီးဘယ်သူ့ကိုကြည့်ချင်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာဘယ်သူ့ကိုမှမခက်ခဲပါဘူး။
သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ပြီးလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေသောရုပ်ရှင်စာရင်းကိုပေးခြင်းဖြင့်။ ဤရုပ်ရှင်သည်လုံးဝအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည် အဓိကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်အတူအမေဇုံ ။
၁။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှနောက်ဆုံးလူမည်း (၂၀၁၉၉)
သူ၏ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရပ်ကွက်တွင်ဂျင်မီနှင့်သူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သော Mort တို့က gentrification ကြောင့်ရလဒ်အနေဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သောအိမ်မှနေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါသူမပြောင်းမှီအိမ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူရန်မစ်ရှင်တွင်သွားခဲ့သည်။ သူတို့၏ရုန်းကန်မှုကသူတို့၏ခင်မင်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးသူတို့မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်ကိုမေးခွန်းထုတ်စေသည်။
၎င်းသည် WWE ပြိုင်ဖက် Paige ၏ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံကာဟာသရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုရုပ်ရှင်နှင့်အတူတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်တကယ့်ဘဝနပန်းသမားမိသားစု၏ဇာတ်လမ်းကိုပြသသည်။ ၎င်းကို Stephen Merchant မှရေးသားညွှန်ကြားသည်။ ဤရုပ်ရှင်သည် Florence Pugh နှင့် Dwayne The Rock Johnson၊ Lena Headey, Vince Vaughn နှင့်အခြားဇာတ်ကားများပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Pugh နှင့်သူမ၏အစ်ကို (Jack Lowden) တို့သည် WWE အတွက်ကြိုးစားကြပြီးသူတို့ထဲမှတစ် ဦး တည်းကိုသာဖြတ်သန်းသွားသောအခါ Pugh သည်တစ် ဦး တည်းသောပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်သည့်ကမ္ဘာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
၎င်းသည်နိုင်ငံရေး၊ ကားရပ်နားခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမှတစ်ဆင့်လှည့်လည်သွားလာရန်မျှော်လင့်မထားသောတင်းမာမှုများအတွက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Dianne Feinstein (Annette Bening) မှရွေးချယ်သောအထက်လွှတ်တော် ၀ န်ထမ်းဒန်နီယယ်ဂျုံး (Adam Driver) မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ခန့်တွင်စီအိုင်အေစစ်ကြောရေးမှတ်တမ်းများပျက်စီးခြင်းတစ်ခုလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ဂျုံးစ်နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်အစိုးရအရာရှိများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်အားထုတ်မှုများကိုရှောင်တိမ်းနေစဉ်နှစ်များတစ်လျှောက်စာရွက်စာတမ်းပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတင်းမာနေသည်းထိတ်ရင်ဖိုပါပဲ။
၄။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အသက်တာ (၁၉၄၆)
ဂျိမ်းစ်စတူးဝပ်၏ထူးခြားသောဖျော်ဖြေမှုပါသောဂန္ထဝင်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဘဝဖြစ်သည်။ Bedford ရေတံခွန်မြို့ရှိဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးမကြာမီမိမိကိုယ်ကိုတံတားပေါ်မှချပစ်ရန်ပြင်ဆင်နေသောဂျော့ခ်ျဘေလီ (Stewart) ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်ပဲ ​​Clarence (Henry Travers) လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအဲဒီမှာပေါ်လာပြီးဂျော့ခ်ျကိုကယ်ဖို့သူ့ကိုဂျော့ခ်ျရဲ့ဘ ၀ ရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနဲ့အရေးအပါဆုံးအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ ။
Kenneth Lonergan မှဒါရိုက်တာသည်မန်ချက်စတာမြို့၌တည်ရှိပြီး၎င်းသည် Lee Chandler (Casey Affleck) သည်ဘယ်တော့မျှပြန်လာလိုမည်မဟုတ်ပါ။ Chandler သည် Quincy ရှိအစောင့်အကြပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ အဖြစ်ဆိုးကသူ့ကိုအိမ်ပြန်စေသည်။ သူ၏အစ်ကိုဖြစ်သူဂျိုး (Kyle Chandler) သည်ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားကာဆယ်ကျော်သက်သားကိုပက်ထရစ် (လူးကပ်စ် Hedges) က Lee အားသူ့ကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၆။ Inside Llewyn Davis (၂၀၁၃)
သူကသူ့ဂီတမိတ်ဖက်ရဲ့သတ်သေပြီးနောက်လမ်းကြောင်းအပေါ်သူ၏ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့ကြိုးစားနေအဖြစ် Llewyn Davis ကအတွင်းပိုင်း Davis ကပြသသည်။ သူ၏ဘဏ္ancesာရေးမှာလည်းသိပ်မတော်လှပါ။ ယခင်ချစ်သူဟောင်း Jean (Carey Mulligan) သည်လည်းသူမနှင့်အတူကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးသူနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
Oldboy ၏ဆုရဒါရိုက်တာဖြစ်သောကိုရီးယားဒါရိုက်တာ Park Chan-wook မှပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Handmaiden ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကကိုရီးယားကိုသိမ်းပိုက်ချိန်၌ရိုက်ကူးထားသောပြင်းထန်သောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွင်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး ပါဝင်သည်။ တစ်ခုမှာဂျပန်အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်ပြီးတစ် ဦး ကအိမ်ခြံဝင်းတွင်ငှားရမ်းထားသည့်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာအိမ်ဖော်အသစ်အဖြစ်ငှားရမ်းထားသောကိုရီးယားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏အမွေအနှစ်ကိုလှည့်ဖြားရန် con ယောက်ျားနှင့်ပူးပေါင်းရန်ကြံစည်နေကြောင်းယခင်ကအနည်းငယ်သာသိသည်
Joaquin Phoenix ဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပျောက်ဆုံးနေသောမိန်းကလေးများကိုအမဲလိုက်ရန်သူ၏စိတ်ဒဏ်ရာကိုအသုံးချပြီးစိတ်ဒဏ်ရာရတဲ့ဝါရင့်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သို့သော်သူ၏အိပ်မက်ဆိုးများကသူ့ကိုမှီပြီးသူ၏ခေါင်းပေါ်မှ ဆက်၍ ဆက်လက်လျှောက်နေစဉ်တွင်သူသွားသောလမ်းပေါ် မူတည်၍ သူ့ကိုဖျက်ဆီးရန်သို့မဟုတ်ကယ်တင်ရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၉ ။ ဂလိုရီယာ (၂၀၁၃)
ဂလိုရီယာသည်အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘာမျှမလိုချင်ဘဲနောက်တဖန်နုပျိုသောခံစားမှုအကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ သူမပျော်ရွှင်မှုရရန်ခရီးကိုသူမနှင့်ကျဆုံးသူအချို့ကနောက်ဆုံးတွင်သူမတွေ့ဆုံပြီးရိုဒေါဖို၏ဖနောင့်အပေါ်သို့ကျသွားသည်အထိဖြစ်သည်။ မကြာမီတွင်ဂလိုရီယာသည်သူမ၏အမှန်တကယ်အသက်ကိုလက်ခံရန်နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ကြီးပြင်းလာရန်စွမ်းအားကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူမ၏မိခင်ဆုံးပါးသွားသောအခါ Annie Graham (Toni Collette) သည်သူမ၏အိမ်ထောင်စုအတွင်းရှိအစဉ်အလာအရိပ်လက္ခဏာအချို့ကိုထိန်းသိမ်းရင်းသူမ၏ခံစားချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ သို့သော်သူမ၏မိသားစုသည်အခြားအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုကြုံတွေ့ရပြီးနောက် Annie သည်လုံးဝကွဲလွဲနေပြီးသူမနှင့်အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရုံသာမကထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များသည်သူနှင့်သူ့မိသားစုကိုပါအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။
၎င်းသည် Ari Aster မှရိုက်ကူးထားသောအော်ပရာပြဇာတ်အဖြစ်လူသိများသည်။ Midsommar သည်လူသိများသောအတိအကျနှင့်တူသည်ကိုပြသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီး suspenseful လမ်းအတွက်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနွေရာသီနွေရာသီပွဲတော်သို့သူငယ်ချင်းများနှင့်ခရီးသွားသည့်ပြင်းထန်သောဆက်ဆံရေးပြသနာများရှိသောအမေရိကန်စုံတွဲကိုပြသည်။ ဒါဟာသိသိသာသာပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာနှင့်မငြိမ်ဖြစ်လာသည်။
၁၂။ Logan Lucky (၂၀၁၇)
သူ၏တစ် ဦး တည်းသောအလုပ်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား Jimmy Logan (Channing Tatum) သည်သူ၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲရန်အလွန်ကြိုးစားနေသည်၊ ၎င်းသည်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသူကောင်းစွာသိသည်။ သူသည် Charlotte Motor Speedway တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်သူသည်လမ်းကြောင်းအောက်တွင်ပိုက်ဆံပြောင်းနေသည့် pneumatic tube system အကြောင်းကိုအားလုံးသိသည်။ မကြာခင်မှာပဲဂျင်မီဟာသူ့လက်နက်ကိုင်အစ်ကိုတစ် ဦး ဖြစ်တဲ့ Clyde (Adam Driver) နဲ့သူ့အစ်မ Mellie (Riley Keough) ကိုငှားရမ်းပြီးလုံခြုံတဲ့ cracker Joe Bang (Daniel Craig) ကိုငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။ သို့သော်ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲကြောင့်သူတို့ကိုကိုကာကိုလာပြိုင်ပွဲတွင်စောစီးစွာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
၁၃ ။ စစ်အေးတိုက်ပွဲ (၂၀၁၈)
စစ်အေးတိုက်ပွဲသည် Wiktor (Tomasz Kot) နှင့်ဂီတဒါရိုက်တာနှင့်အဆိုတော်ဖြစ်သည့် Zula (Joanna Kulig) တို့၏ဘ ၀ ကိုပြသသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးချစ်မြတ်နိုးကြသည်။ မကြာခင်မှာပဲနှစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရဲ့ဘဝတွေကိုအတွင်းနှင့်ထွက်နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ပြီးပျံ့။ စစ်အေးတိုက်ပွဲသည်ကြည့်ရှုရန်လှပသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့ပါကစ္စတန်နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုတူးဖော်နေစဉ်မှာ stand-up ဟာသအလုပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ရုန်းကန်နေရသော Kumail မှစတင်သည်။ သူ Emily (Zoe Kazan) အမည်ရှိမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ပြီးမကြာမီသူသည်တစ်ညတည်းခိုခန်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဆက်ဆံရေးတွင်သူတို့နှစ် ဦး သည်အခက်အခဲအချို့ကြုံတွေ့ရသည်။ Kumail ၏မိဘများကသူ့ကိုပါကစ္စတန်မှမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူနေထိုင်စေလိုသည်။ မကြာခင်မှာပဲရောဂါကူးစက်မှုကအမ်မလီကိုမေ့မြောသွားတယ်။ Kumail သည်အမ်မလီကိုဆေးရုံသို့သွားစဉ်သူမမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးသူတို့နှင့် Emily အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
၁၅ ရာထူး (၂၀၁၁)
ဒါဟာဟာသလိုင်းများနှင့်အတူတစ်တောရိုင်းအနောက်အယူအဆပါပဲ။ Depp's Rango သည်အမှိုက်ပုံတွင်နေထိုင်ပြီးမြို့ပျောက်ဆုံးနေသောရေကိုရှာဖွေရာတွင်ရဲအရာရှိ၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ဒါဟာ Gore Verbinski ကညွှန်ကြားထားသည်။
၁၆။ မမြင်နိုင်သောစစ်ပွဲ (၂၀၁၂)
ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်အတွင်းအကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းပါ။ The Invisible War သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်အမှတ်ရသည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်နက်ကိုင်တပ်များ၏ဌာနခွဲအသီးသီးမှစစ်ပြန်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုပြသသည်။ သူတို့၏ပုံပြင်များတွင်တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအားဂရုမစိုက်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကစစ်တပ်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်၎င်းအားအသက်ရှင်ကျန်သူများအားကိုင်တွယ်ပုံကိုပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၁၇။ မီးပြတိုက် (2019)
ဒီမီးပြတိုက်ကို Robert Eggers ကရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၁၉ ရာစုလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးပြတိုက်ကိုပြသထားတယ်။ Winslow နှင့် Wake ကျွန်းတစ်ကျွန်းတည်းတွင်ပင်လမ်းလျှောက်ပြီးတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ရူးသွပ်ခြင်းစတင်ခြင်း။ Pattinson နှင့် Dafoe ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။
၁၈။ နှုတ်ဆက်ခြင်း (၂၀၁၀၉)
Awkwafina သည်စာရေးဆရာဘိလီဝမ်၏အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီးသူမ၏အဘွားနိုင်ိုင် (Zhao Shu-zhen) သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကြောင့်မကြာမီသေဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာသူဖြစ်သည်။ ပိုမိုဆိုးရွားစေရန်, Billi ၏မိဘများ၊ Haiyan Wang (Tzi Ma) နှင့် Lu Jian (Diana Lin) နှင့်ကျန်မိသားစုဝင်များသည် Bili သည်နိုင်နိုင်းအားသူမအသက်ရှင်ရန်ရက်အနည်းငယ်သာအကြောင်းကြားရန်တားဆီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏မိသားစုကပေးခဲ့သောကတိသည်ဘီလီအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ သို့သော်သူမချစ်မြတ်နိုးသည့်အဖွားနှင့်သူမဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်လှပပြီးထိမိသည်။
၁၉။ အာဖရိကဘုရင်မ (၁၉၅၁)
Amazon Prime ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေထဲကတစ်ခုကအသက်အရွယ်မရွေးသုံးစွဲသူများကိုသူတို့မမွေးခင်ဆယ်စုနှစ်များစွာကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဖရိကဘုရင်မကြီးသည်ဒါရိုက်တာဂျွန်ဟူစတန်၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းသည်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းရှိဘဝအသက်တာကို Rose Sayer (Hepburn) သာသနာပြုတစ် ဦး နှင့်မြစ်ကြမ်းပြင်လှေမှူး Charlie Allnut (Bogart) အနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အာဖရိကဘုရင်မကြီးရုပ်ရှင်သည်ချာလီနှင့်နှင်းဆီကိုအန္တရာယ်များစွာဖြစ်စေသည်။
၂၀။ ဓားများ (၂၀၁၉၉)
ဤရုပ်ရှင်သည်နာမည်ကြီးရာဇ ၀ တ်ဆရာတစ် ဦး အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ မိသားစုတစ်စုစုရုံးပြီးနောက်တစ်ညတွင်ရဲများကလူများအားသံသယဖြစ်စေသည်။ Daniel Craig သည်စုံထောက်ကို Benoit Blanc ၏အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သူသည်သေခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကူညီပေးသည်။
ဒီသိပ္ပံဝတ္ထုသည် Thriller သည်ငယ်ရွယ်သော switchboard operator နှင့် radio DJ တစ်ခုကိုလည်းပြသပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အသံကြိမ်နှုန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများစွာမှထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုမသိသောနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်ရှိစေသည်။
Rocketman က Taron Egerton ကိုသရုပ်ဆောင်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးမြို့ငယ်လေးမှလူတစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတကာစူပါစတားအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဂျွန်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပြသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုလည်းဂျွန်ရဲ့စာသားနှင့်အရေးအသားမိတ်ဖက် Bernie Taupin အဖြစ်ဂျေမီဘဲလ်ပါရှိပါတယ်။
၂၃ ။ ဝုဒ်ရှိအခန်းများ (၂၀၁၂)
Drew Goddard ၏ The The Cabin the Woods ရုပ်ရှင်သည်အလွန်ထူးခြားသည့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝဝေးလံသောနေရာတွင်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောနေရာတွင်တည်းခိုနေစဉ်ဆိုးညစ်သည့်တပ်ဖွဲ့များကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စုကိုပြသသည်။ Goddard နှင့်တွဲဖက်စာရေးဆရာ Joss Whedon သည်မည်သူမျှမလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အတူရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလှည့် စား၍ လိမ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်မှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရယ်စရာကောင်းသောရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြင်ကွင်းမျိုးစုံတောင်းဆိုရန်ဝှက်ထားသောအရာများစွာရှိသည်။ သင်က The Woods ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Cabin ကိုမမြင်ရသေးလျှင်, သင်ဤရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းသိသောသင်၏အကောင်းဆုံးအဘို့ဖြစ်၏။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ကထိုအရာကိုမြင်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုသင်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ရှုခြင်းအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဟုအခွင့်ကောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။
၂၄။ အမြန်အရောင် (2019)
အင်အားကြီးသောစွမ်းရည်ရှိသောမျိုးဆက်သစ် ၃ မျိုးဆက်အားဤသိပ္ပံဝတ္ထုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိခြင်းသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်မျိုးဆက်ကွဲပြားမှုများကိုအာဏာအချို့ရှိခြင်းကြောင့်ဆိုးသွမ်းသောအင်အားစုများကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ ထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်၏နောက်ခံအခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။
25. Boondock Saints (၂၀၀၀)
ဘော်စတွန်မှညီအစ်ကိုနှစ် ဦး သည်ပြactionနာများစွာရှိနေသော်လည်းအိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးလောကတွင်ကြီးမားသောထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်သည့်ဤလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်တွင်ရုရှားလူအုပ်ကိုဖြုတ်ချရန်ကြီးမားသောမစ်ရှင်တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းပြသထားသည်။ Sean Patrick Flanery နှင့် Norman Reedus တို့က MacManus ညီအစ်ကိုများကိုကစားသည်။ သူတို့၏ကံသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ဒေသအတွင်းရှိသူရဲကောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး Willem Dafoe မှကစားသော Fcent agent နှင့်တိုက်မိသည့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။
၂၆ ။ Murderball (၂၀၀၅)
quad ရပ်ဂ်ဘီလိဂ်အတွက်ကစားသမားကိုပြသသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကစားသမား '' ဘဝ, အားကစားမှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့သောအရာကိုနှင့်ဤအားကစားသူတို့အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပြသနေစဉ်, ဂရိ, အေသင်, Paralympic အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားသူအများအပြားအသင်းများကိုအောက်ပါအတိုင်း။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် Marvel စတူဒီယိုများသည် Avengers ဟုလူသိများသည့်ကြီးမားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်တစ်ကိုယ်တော်စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားများစွာ၏ကြယ်အားလုံးကိုစုစည်းခဲ့သည်။ The Avengers သည်စူပါဟီးရိုးအမျိုးအစားတစ်ခုလုံးအတွက်ဂိမ်းလဲလှယ်သူဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူအားလုံးနှစ်သက်သည်။
သူသည်ရုန်းကန်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးသောဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်သို့ငယ်ရွယ်သောအောင်မြင်မှုမှတစ်ဆင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကလေးသရုပ်ဆောင် Otis Lort ၏ဘဝကိုဖော်ပြသည် သူ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအရက်သမားဖခင်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်သူတို့၏အန္တရာယ်များသောဆက်ဆံရေးသည်ပြိုကွဲသွားခြင်းကြောင့်မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်သွားသည်။
၂၉။ မစ်ရှင် - မဖြစ်နိုင်သော - Fallout (၂၀၁၈)
ဒီရုပ်ရှင်ဟာလျှို့ဝှက်အေးဂျင့် Ethan Hunt (Tom Cruise) နဲ့စတင်ပြီး Impossible Missions Force လမ်းပေါ်မှာခိုးယူတဲ့ပလူတိုနီယမ် cores အချို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချရအောင်ကြိုးစားနေတာနဲ့စတင်ပါတယ်။ မစ်ရှင်မှားယွင်းသွားသောအခါအဓိကတပ်ဖွဲ့များသည်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်စု၏လက်သို့ကျရောက်သွားသည်။ ထပ်မံကျသည်အများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
၃၀။ ဘဝမြင့်ခြင်း (2019)
High Life သည်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်သိပ္ပံဝတ္ထု၏ထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် Juliette Binoche သည်အာကာသမစ်ရှင်၏ကြီးကြပ်သူဒေါက်တာ Dibs ၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ သူသည်တွင်းနက်မှစွမ်းအင်ထုတ်ယူရန်ရာဇ ၀ တ်သားများကိုစေလွှတ်နေသည်။ လမ်းခရီးတွင် Dr. Dibs သည်ရာဇ ၀ တ်သားများအပေါ်၎င်းတို့၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လူသတ်သမား Monte (ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်) ကိုသူ၏သမီးနှင့်အတူတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးသူတို့သေလုနီးပါးဖြစ်နေချိန်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
အight္ဌမတန်းရုပ်ရှင်သည်သူမအလယ်တန်းကျောင်းနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်များတစ်လျှောက်လုံးလမ်းလျှောက်ရင်း ၁၃ နှစ်အရွယ် Kayla တစ်ဝိုက်ကိုအဓိကထားသည်။ အight္ဌမတန်းသည်အလယ်တန်းကျောင်းအကြောင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးအလယ်တန်းကျောင်းသားများကိုပြသသည့်အတွက်၎င်းသည် ပို၍ ပင်ရယ်စရာကောင်းပြီးကြည့်ရတာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
၃၂။ ပျောက်ဆုံးနေသော Z ၏မြို့တော် (၂၀၁၆)
The Lost City of Z အမည်ရှိသော ၂၀၀၉ စာအုပ်ကို အခြေခံ၍ ဗြိတိသျှစူးစမ်းရှာဖွေသူပါစီဖော့ကတ် (ချာလီဟွန်းနမ်) ၏ ၂၀ ရာစုအစတွင်အမေဇုန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြသခဲ့သည်။ သူသည်မတိုင်မီကခရီးသွားစဉ်ဒေသတွင်း၌ရှိခဲ့သောယခင်ကမသိသောယဉ်ကျေးမှု၏သက်သေအထောက်အထားများကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာမီသူသည်တောသို့ပြန်လာပြီးသူ၏အချက်ကိုသက်သေပြရန်နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသော Z ၏စီးတီးကိုရှာဖွေရန်အလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။
Sense Making Stop (၁၉၈၄)
၁၉၈၄ ခုနှစ်ခန့်တွင်ဒါရိုက်တာ Jonathan Demme သည် Talking Heads for Stop Making Sense အမည်ရှိတီးဝိုင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ရှိ Pantages ပြဇာတ်ရုံတွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုလေးခုမှ Demme သည်ရုပ်ရှင်ကိုအလွယ်တကူရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီး Talking Heads ကသူတို့၏ဘဝများကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
34. နဂါးကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ (2010)
ကာတွန်းရုပ်ရှင်တိုင်းသည်လက်ငင်းဂန္ထဝင်မဟုတ်သော်လည်း How To Train Your Dragon သည်သင်၏အမျိုးအစားနှင့်အညီနေထိုင်ပြီးသင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေသည်။ ၎င်းသည်နာမည်တူသောစာအုပ်တစ်အုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ မင်းနဂါးကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဟစ်ကော့ (Jay Baruchel) အမည်ရှိဗိုက်ကင်းလူငယ်တစ် ဦး ၏ဘဝကိုပြသသည်။ နဂါးများသည်သူတို့၏သေစေနိုင်သောရန်သူများအစားလူသားတို့နှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသူသဘောပေါက်သည်
Hiccup သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့်အကြိမ်များစွာယုံကြည်မှုအရ Hiccup ရထားနှင့်နောက်ဆုံး၌သူ၏ကမ္ဘာကိုထာဝရပြောင်းလဲစေသောအနက်ရောင်နဂါးသေးငယ်သည့် Toothless နှင့်အတူရထားများ၊ ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ကာတွန်းကဒီရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက်ငါတို့စုပေါင်းသက်ရှိထင်ရှားကိုပျောက်ကွယ်သွားစေတယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားထွက်ပေါ်လာသော်လည်းဤဇာတ်ကားသည်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
၃၅။ လူကိုသတ်ပါ (၂၀၂၀)
Blow the Man Down သည် Amazon Prime သို့ရောက်ရှိလာသည့်မှောင်မိုက်သောဟာသရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ Morgan Saylor နှင့် Sophie Lowe တို့သည်ညီအစ်မများဖြစ်သော Mary Beth နှင့် Priscilla Connolly တို့ဖြစ်သည်။ မေရီဗက်ကသူမကိုအန္တရာယ်ပြုရန်ကြိုးစားနေသူကိုသတ်သည့်အခါပြစ်ကိလကသွေးသည်ရေထက်ပိုထူပြီးသူမအစ်မကိုကျန်ရှိနေသေးသောအထောက်အထားများကိုဖုံးကွယ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါပေမယ့် Connolly အစ်မတွေအဘို့, လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသေးငယ်တဲ့မြို့မှာထိန်းသိမ်းရန်ခဲယဉ်းသည်သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူကိုမသိ။
၃၆။ ပထမဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (၂၀၁၇)
Ethan Hawke သည်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအကျပ်အတည်းတစ်ခုတည်းကိုသာခံစားနေရသော Ernst Toller ၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ သူကသူတို့အားလုံးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်။ Mary Mensana (Amanda Seyfried) အမည်ရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ခင်ပွန်းမိုက်ကယ် (Philip Ettinger) အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်တောင်းပန်သောအခါသင်းအုပ်ဆရာသည်မကြာမီသူသည်ကမ္ဘာသို့မိုက်ကယ်၏ရှုမြင်ပုံကိုလက်ခံလာသည်။
၃၇ ။ Paterson (၂၀၁၆)
Adam Driver သည် Paterson ဖြစ်ပြီးဘတ်စ်ကားမောင်းသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်မှာတော့ Paterson နေတုန်းပဲမိမိကိုမိမိ၏ရှုထောင့်ကိုအပြည့်အဝလက်ခံရန်သင်ယူမထားပါဘူးသူတစ် ဦး ကဗျာဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးသည်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ပြသနေပြီးဤရုပ်ရှင်၌ Paterson ၏ဇနီး Laura (Golshifteh Farahani) နှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲအလွယ်တကူပုံစံပြိုကွဲသွားပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုတွေကသူ့ဘဝကိုထိခိုက်သွားတယ်။
ကာစီနို Royale (၂၀၀၆)
Casino Royale တွင်လောင်းကြေးများပြိုင်ပွဲတွင်ပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Bond သည်ကိစ္စရပ်အတွက်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သော Vesper Lynd (Eva Green) နှင့်ကာယပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Vesper သည်ဘွန်းကိုတကယ်ချစ်သောမိန်းကလေးဖြစ်သည်။
၃၉။ Terminator (၁၉၈၄)
Terminator သည် Linda Hamilton မှ Sarah Connor ၏မူလအစဖြစ်သည်။ စာရာသည်အထင်ကရအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုသူရဲကောင်းမဖြစ်မီကသူမသည်စားပွဲထိုးမပါသော ဦး တည်ချက်မရှိသောမိန်းမငယ်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ လူ့ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စစ်သား Kyle Reese (Michael Biehn) အားစာရာအား Ar -old Schwarzenegger မှတီထွင်ခဲ့သော T-800 Model Terminator မှစာရာကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရန်အချိန်မီပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ Kyle အရစာရာသည်လူသားများအနာဂတ်အတွက်အောင်ပွဲသို့ ဦး ဆောင်မည့်သူ John Conner ကိုမွေးဖွားရန်ရည်ရွယ်သည်။ နှင့် T-800 စာရာကိုသတ်ပစ်ရန်လိုသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စက်ဆီကိုအားလုံးရောက်သွားတယ်။
40. သဲလွန်စ (1985)
ကောင်းကွက်များမှာ Tim Curry, Christopher Lloyd, Eileen Brennan, Madeline Kahn, Michael McKean, Martin Mull နှင့် Lesley Ann Warren တို့ပါဝင်သည်။ မုန်တိုင်းထန်သောညတွင်မစ္စတာဘိုဒီသည်သူစိမ်းများကိုအုပ်စုဖွဲ့ရန်သူ၏အိမ်ကြီးသို့စုရုံးခဲ့သည်။ အလောင်းတွေတန်းစီလာတဲ့အခါသူတို့တွင်လူသတ်သမားတစ် ဦး ရှိတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
41 Crawl (2019)
ဤရုပ်ရှင် Crawl တွင်၊ အမျိုးအစား ၅ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းသည်သူမ၏မိသားစုအိမ်တွင်ရေတက်လာသည်နှင့်အမျှ Haley Keller (Kaya Scodelario) အမည်ရှိအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး အားအန္တရာယ်ရှိသည့်မီးခိုးများနှင့်ကပ်ထားသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Haley အားကြီးသောရေကူးရဲ့, သူသည်သူမ၏အဖေ, Dave (Barry ငရုတ်ကောင်း) ကိုကယ်ဖို့ထွက်ပါပဲ။ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မီးခိုးများအထက်၌ရှိသောသူတို့သည်အိမ်မှထွက်ပေါက်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့နေကြသည်။ Crawl Haley, Dave နှင့်ပင် Haley ရဲ့ခွေး, Sugar များအတွက်အနီးကပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူတင်းမာမှု၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏပြသထားတယ်။ သို့သော် Keller မိသားစုသည်မီးခိုးများသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းများထက် ပို၍ စိုးရိမ်စရာရှိသည်။ Crawl စာသားကသူတို့ဘဝများ၏တိုက်ပွဲကိုသရုပ်ဖော်သည်, ဒါကြောင့်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိတ်လန့်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
42. Creed II ကို (2018)
Creed II သည်ပထမဆုံးသော Creed ၏နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Rocky IV နှင့်လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည်။ Adonis Creed (Michael B. Jordan) နှင့် Rocky Balboa (Sylvester Stallone) တို့၏ခိုင်မာသောပုံပြင်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပေးခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Ivan Drago (Dolph Lundgren) သည်သူတို့၏ဘဝများသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ Creed ကိုသားဖြစ်သူ Viktor Drago (Florian Munteanu) ကိုတိုက်ခိုက်ရန်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်မံကျသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုမှာ Creed နှင့် Rocky တို့ကိုခွဲခြား။ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းမပြုမီ။ ဒါကြောင့် Creed II ဟာပုံသေနည်းကိုထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။
၄၃။ တတိယမျိုးဆက်များနှင့်နီးစပ်သူများ (၁၉၇၇)
ဒီရုပ်ရှင်ကိုစတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ တတိယမျိုး၏အနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်အင်ဒီယားနားတွင်နေထိုင်သောအပြာရောင်ကော်လာလုပ်သားတစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြသသည်။ အမည်မသိပျံသန်းနေသည့်အရာဝတ္ထုနှင့်ထူးဆန်းစွာကြုံတွေ့ရပြီးနောက်သူ၏ဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
၎င်းရုပ်ရှင်သည်စပီးလ်ဘာ့ဂ်ကိုရွိုင်းနီရီ၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သော Jaws - Richard Dreyfuss နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ သူသည် UFO များနှင့်စွဲလမ်းမှုကြောင့်သူ့ကိုဝန်းရံသူမည်သူမဆိုနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
ဒါရိုက်တာ -Spielberg ကိုအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အသံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ပင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဤရုပ်ရှင်သည်သူတို့၏ချီကာဂိုရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသောဂိုဏ်းဂဏအကြမ်းဖက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သဘောတူသည်အထိသူတို့၏ချစ်သူများ / မိတ်ဖက်များထံမှလိင်ကိုတားဆီးရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုအကြောင်းဖြစ်သည်။
၄၅။ စတင်မှု (၂၀၁၀)
ဤသည်သိပ္ပံဝတ္ထုသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ပြီးခရစ်စတိုဖာ Nolan မှရိုက်ကူး။ ညွှန်ကြားထားသည်။ Leonardo DiCaprio သည်သူ၏ရည်မှန်းချက်များ၏မသိစိတ်အတွင်းမှအချက်အလက်များကိုခိုးယူနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသူခိုးအဖြစ်ပစ်ချလိုက်သည်။ သူကတစ်စုံတစ် ဦး ၏စိတ်ထဲသို့အတွေးတစ်ခုထည့်သွင်းရန်အစားသူခိုးကိုခိုးယူမည့်အစားအလုပ်မျိုးစုံအတွက်ငှားရမ်းသောအခါ၎င်းသည်လောင်းကြေးကိုမြှင့်သည်၊ ထို့နောက်သူသည်၎င်းကို ပို၍ ပင်အန္တရာယ်များသောလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သည်။
ကလေးငယ်တစ် ဦး (၂၀၁၉)
One Child Nation သည်ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ လူအများကြားဖူးနိုင်ဖွယ်ရှိသောမူဝါဒတစ်ခုကို၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိအနည်းငယ်မျှသာ၎င်းကိုအမှန်တကယ်နားလည်ခဲ့ဖူးသည်။ Nanfu Wang နှင့် Jialing Zhang တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှမွေးဖွားသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်အတူ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မူဝါဒကိုပြန်ကျင့်ခဲ့ကြပြီးမိသားစုများကိုကလေးတစ် ဦး ထက်ပိုမယူခွင့်ပြုခဲ့လျှင်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
47. တပ်များသုည (2019)
၁၉၇၇ ခုနှစ်ဂျော်ဂျီယာကျေးလက်ဒေသတွင်အာကာသအတွင်းနေထိုင်ရန်အိပ်မက်မက်နေသောလင်းလက်တောက်ပသောမိန်းကလေး (McKenna Grace) ၏ဘဝကိုဒီ Amazon မူရင်းကပြသသည်။ Lucy Alibar သည်ပူးတွဲစာရေးသူဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာများမှာ Bert & Bertie ။ နောက်ဆုံးတွင် Grace သည်အမျိုးသားယှဉ်ပြိုင်မှုအပြီးတွင်သူမ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အခွင့်အလမ်းရသောအခါသူမကထိုအရပ်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်သည့် Birdie ကင်းထောက်အဖွဲ့၏ ragtag အဖွဲ့ကိုငှားရမ်းသည်။
၄၈ ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ Negro မဟုတ်ပါ (2016)
ဒါရိုက်တာ Raoul Peck သည်ကျွန်ုပ်မပါဝင်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့် Baldwin ၏အမြင်များကိုမည်သို့မည်ပုံလေ့လာသည်၊ ၎င်းတို့သည်ဆူညံသံများသာမကခေတ်သစ်အမေရိကသို့သွားသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။ ငါမသည်သင်၏ Negro Baldwin ရဲ့အလုပ်ပြီးဆုံးဘယ်တော့မှနှင့်လည်းပိုပြီးအရေးကြီးသောခဲ့ဘယ်တော့မှသောအထင်အမြင်နှင့်အတူ၎င်း၏ကြည့်ရှုသူအရွက်။
49. Busan သို့ရထား (၂၀၁၆)
ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းမကြားရဘူးလား ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆိုးရွားလှတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကဆိုးလ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတွေကိုအသားစားသတ္တဝါတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖုတ်ကောင်များကဲ့သို့ဆိုးလ်မြို့မှဘူဆန်သို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီးနင်းလိုက်ပါလာသူခရီးသည်အုပ်စုတစ်စုကိုပြသထားပါတယ်။ ရှင်သန်ရန်။
ဤသည်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာ Yeon Sang-ho ကညွှန်ကြားထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်ရထားပေါ်တွင်လူအုပ်စုငယ်လေးများကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်သည်။ သူတို့နှင့်မတူကွဲပြားမှုများကိုဝေးဝေးရှောင်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့ချစ်ရသူများကိုဘေးကင်းလုံခြုံ။ ရှင်သန်စေရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်တောင်ကိုရီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ပါသေတ္တာရုံးမှတ်တမ်းများစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၅၀။ ညချမ်း (၂၀၁၀)
ဒီရုပ်ရှင်ကိုမင်းဒီ Kaling မှရေးထားပါသည်။ သူကဒီရုပ်ရှင်မှာတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ညဥ့်နက်တီဗီအိမ်ရှင်အကြောင်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ သူရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အငှားပြပွဲရဲ့အရေးအသားအဖွဲ့ကသူမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိသည့်ထူးခြားတဲ့အရာများကွင်းဆက်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ Emma Thompson သည်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်လည်းထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖျော်ဖြေမှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ Kaling နှောင်းပိုင်း - ညဥ့်ဟာသ၏အထီးကမ္ဘာကိုသွားလာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတဲ့သူအိန္ဒိယ - အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကစားနေစဉ်။
Prime Video တွင်သင်ကြည့်ရှုနိူင်သောထိပ်တန်းရုပ်ရှင် ၅၀ စာရင်းဖြစ်သည်။ သင်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသောရုပ်ရှင်အချို့ဖြစ်သောကြောင့်သင်ကြည့်ရှုသင့်သောရုပ်ရှင်များကိုနေရာတကာတွင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်နှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
Blink XT2 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ထိုက်တန်သောကြိုးမဲ့အဆောက်အ ဦး အပြင်ကင်မရာ?
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်သင်ကစားသင့်သည့်အကောင်းဆုံး Wii ဂိမ်းများ
အခမဲ့ pokemon go အကောင့်များအခမဲ့ဖြစ်သည်
ရုပ်ရှင် 123 ကိုအွန်လိုင်းမှာအခမဲ့ကြည့်ပါ